Fri, Jul 30, 2021 |Updated 04:26 IST
Death toll from South Africa's unrest rises to 337
Death toll climbs to 72 as violence continues in South Africa
Johannesburg [South Africa], July 14 (ANI): Despite President Cyril Ramaphosa's order to deploy troops to quell the unrest, the death toll due to violence in South Africa, following the arrest of former President Jacob Zuma, has risen to 72 on Tuesday.
Anrich Nortje, Shabnim Ismail named South Africa men's and women's
Johannesburg [South Africa], June 1 (ANI): Proteas pacer Anrich Nortje and Shabnim Ismail were named South Africa men's and women's Cricketer of the Year in their respective categories at CSA's virtual awards ceremony on Monday.
Anrich Nortje, Aiden Markram, Shabnim Ismail in contention for Cri
Johannesburg [South Africa], May 24 (ANI): Pacer Anrich Nortje, batsman Aiden Markram and women's all-rounder Shabnim Ismail are among the several Proteas cricketers who were on Monday nominated for annual Cricket South Africa (CSA) awards in various categories.
AB de Villiers not coming out of international retirement for T20
Johannesburg [South Africa], May 18 (ANI): Cricket South Africa (CSA) on Tuesday announced that former Proteas cricketer AB de Villiers will not be coming out of retirement as the batsman has decided "once and for all" that his decision to retire remains final.
South Africa to tour West Indies for first time in 11 years for bi
Johannesburg [South Africa], May 14 (ANI): Cricket South Africa (CSA) on Friday confirmed the Proteas men's tour to West Indies following months of positive engagement with Cricket West Indies (CWI).
IPL 2021: South Africa contingent travelling to Johannesburg via M
Ahmedabad (Gujarat) [India], May 6 (ANI): Following BCCI's announcement on the suspension of Indian Premier League (IPL) 2021, the management of Royal Challengers Bangalore on Thursday said that it has ensured that every member of the travelling contingent reaches home safely.
IPL 2021: CSA in contact with franchises to ensure expedited trave
Johannesburg [South Africa], April 23 (ANI): South African sports minister Nathi Mthethwa on Friday warned the Cricket South Africa (CSA) interim board and members' council that he intends "defunding" and "derecognising" of the organisation.
South Africa suspends use of Johnson & Johnson COVID-19 vaccin
Johannesburg [South Africa], April 14 (ANI): South African Health Minister Zweli Mkhize on Tuesday said that the country will be suspending the use of the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine after health concerns raised by the US Food and Drug Administration (FDA).